Pakistan oo soo riday labo diyaaradood ay leedahay INDIA • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Pakistan oo soo riday labo diyaaradood ay leedahay INDIA
Pakistan oo soo riday labo diyaaradood ay leedahay INDIA
February 27, 2019 - By: Hanad Askar
Dowlada Pakistan ayaa maanta oo Arbaca soo riday labo diyaaradood oo nooca dagaalka ah oo laga leeyahay India sida lagu sheegay qoraal saaka kasoo baxay Wasaarada Arrimaha Dibada ee Pakistan.
Diyaaradaha India ayaa la sheegay inay gudaha usoo galeen hawada Pakistan kadibna lasoo riday, militariga Pakistan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen qaar kamid ah duuliyayaashii diyaaradahaasi waday.
Soo ridida diyaaradahan ayaa timid kadib markii Pakistan ay duqeyn dhanka cirka ah la beegsatay dhulka India ka taliso ee gobalka Kashmir taasi oo ay uga jawaabeyso duqeyntii India la beegsatay Salaasadii shalay dhulka Pakistan.
Diyaaradaha India ayaa la sheegay inay isku dayeen inay baacsadaan kuwa Pakistan ee saaka hawadooda soo galay, balse keentay in India laga soo rido labo diyaarad oo mid kamid ah kusoo dhacday gudaha dhulka Pakistan.
— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 February 2019
Diyaarada labaad ayaa ku dhacday dhinaca Kashmir ee India maamusho, waxaana la xaqiijiyey in halkaasi ay ku dhinteen labo duuliye iyo qof rayid ah, balse dowlada India ayaan weli ka hadal warka kasoo baxay dowlada Pakistan.
Labada dowladooda ee jaarka ah oo heysta hubka Nukliyeerka ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay is dhaafsanayey hadalo kulul oo todobaadkan isu bedalay iska horimaad hubeysan, waxayna sidoo kale xalay labada ciidan ee dalalkaasi is dhaafsadeen duqeyn madaafiic.
Xiisada ayaa sare usii kacday kadib markii kooxaha ka dagaalama dhulka Kashmir ay weerar ismiidaamin ah ku dileen 42 askari oo Hindi ah 14kii bishan Feberaayo, weerarkaasi oo ay India ku eedaysay inay ka danbeysay Pakistan.